Xoghayaha Nusoj Cumar Faaruq oo kamid noqday hogaanka suxufiyiinta aduunka (Daawo) – Radio Daljir
Xoghayaha Nusoj Cumar Faaruq oo kamid noqday hogaanka suxufiyiinta aduunka (Daawo)
Juunyo 13, 2019 7:53 g 0
Xoghayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ Omar Faruk Osman ayaa ku biiray golaha u sareeya ee ururka suxufiyiinta aduunka ee ay IFJ sadexda sano ee soo socota.
Cumar ayaa helay 192 cod oo ka mid ah 216 cod oo kamid ah ergayda dooranaysay.
Waa markii labaad oo xoghaye Faaruuq ku biiro gudiga fulinta IFJ da waana xubintii ugu codadka badnayn oo kamid ah golahan fulinta ee maanta la doortay.
Hadaba Cumar Faaruq ayaa waraysi uu caawa siyeey radio daljir wuxuu kaga hadlay doorashada dhacday iyo shirkaas waxyaabaha diirada lagu saarayo.
Maxamed Lakiman oo Garoowe jooga ayuu u waramay.